नेकपाका अध्यक्ष दाहाल सरकारप्रति आक्रामक | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ माघ २०७५, शनिबार ०९:३९ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले आत्मसात गरेको मर्मअनुसार प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेटका अधिकार प्रत्याभूत नगरेको उनले औंल्याएका छन् ।
उनले शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत प्रहरीबाट काम भइरहेको संकेत गरे । ‘मलाई चिन्ता लागेको छ । आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत प्रहरीकहाँ भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरि उही ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ । मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट साभार
स्याटलाईट सिटीको लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्ने तयारी, कित्ताकाट रोक्दा जग्गाधनी अन्योलमा !
काठमाडौं । सरकारले उपत्यकामा बनाउन लागेको स्याटलाईट सिटीको लागि परामर्शदाता कम्पनी…
विदेशबाट आउनेले सुन ल्याउन पाउने
काठमाडौं । विदेशबाट आउनेले थोरै मात्रामा सुन ल्याउन पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधवार संसदमा बजेट प्रस्तुत…
त्रिविका सबै क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली सुरु, सेमेस्टर प्रणालीअनुसार नै अहिले आंगिक क्याम्पसमा भर्ना !
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने सबै क्याम्पसमा यसै वर्षदेखि…
नेपालमा पहिलोपल्ट कलेजोको वरिपरी पलाएको पाँच किलो ट्युमर झिकियो
काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले कपिलवस्तुका ४४ वर्षीय एक बिरामीको कलेजोको वरिपरि पलाएको ट्युमर (हेमान्जिओमा) को शल्यक्रिया…
सभामुखले बोल्न नदिएपछि संसदमा कांग्रेस र राजपाको नाराबाजी
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोल्न समय नदिएपछि प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदले नाराबाजी गरेका…